Ukukhanya kwelanga kwe-China Ukukhanya kwelanga, ukukhanya kwelanga kwelanga ukufunda i-Lght, umthengisi wokukhanya ngokukhanya kwelanga
Inkcazo:Ukukhanya kwelanga ukukhanya,I-LED yokufunda i-LED iLght,Ukukhanya kwelanga ukukhanya kwelanga,Ukukhanya kwelanga lokuFunda kwelanga,,
Ukukhanya kwelanga ukukhanya,I-LED yokufunda i-LED iLght,Ukukhanya kwelanga ukukhanya kwelanga,Ukukhanya kwelanga lokuFunda kwelanga,,
Home > Imveliso > Ukukhanya kwelanga > Ukukhanya kwelanga ukukhanya
Iintlobo zeMveliso ze- Ukukhanya kwelanga ukukhanya , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Ukukhanya kwelanga ukukhanya , I-LED yokufunda i-LED iLght ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukugcina amandla: ukubonelela amandla kagesi ngokuguqulwa kweelfowuni yelanga, engapheliyo kwaye ingapheliyo; Ukukhuselwa kwendalo: akukho ngco liseko, akukho sandi, akukho mijelo; Ukhuseleko: akukho zengozi ezifana nokutshatyalaliswa kombane,...
Ayikho iLamp lamp yeStroboscopic LED Eye Guard Guard
Ayikho isibane se-LED yesitrogi : I- Minimalist style / touch touch three dimmer / i-lamp / rotatable pole / usetyenziso olukhutshwayo / ilinki ye-LED yokulinda iso. Ilinganiswe umbane: 5V yangoku yongeniso: i-1000mA port ehambayo ngaphandle...
Ukuhlaziywa kwakhona Ukufunda Ukufunda Iimpawu zelanga ze-LED
Amandla okubonelela: High scale production line, with a daily capacity of 20,000 PCS, can fully guarantee customers' supp
I-100% entsha yekhwalithi ephakamileyo yokubuyisela i-USB yokukhanya kwelanga ilungele ibhetri etshayiweyo. Indlela yokuhlawula: xa iphaneli yelanga ityala phantsi kwelanga, isibonakaliso siya kukhanya. Musa ukushiya isibane kwindawo eshushu kwaye...
Ukukhanya kweMandla ekuHlazileyo kweMandla eNinzi
Lolu hlobo lwesibane sokufunda sokukhanyisa oludibene ne- USB ukuhlawula isibane sokufunda esingenazintambo sincinci kwaye kulula ukuyithwala, isitayela esinoveli, isakhiwo se-avant-garden, umthombo wokukhanya ulamkela i-LED, ukuqokelela kakuhle,...
Ukukhanya kwelanga ukukhusela ukukhanya kwamehlo
Yonke imveliso ibunzima, ifanelekile kumgangatho kwaye yenzelwe kakuhle. I-angle yokukhanyisa ingaguquleka ngokubhekiselele kwiimfuno zangempela, kwaye ukujikeleza okuphezulu kunokuba ngama-360 degrees. Kwintsimi yokukhanyisa, ukudibanisa kwe-LED...
KwiChina Ukukhanya kwelanga ukukhanya Abaxhasi
Ngexesha apho abantu basezidolophini banamhlanje bezuza ngokuyilo lwezoshishino, le mveliso ibandakanyeka ngakumbi ukubaluleka kwiimfuno eziphuthumayo zabantu base-Afrika nakwezinye iindawo ezikude ezingenambane nombane kwaye zinika ukunakekelwa kwabantu. Imveliso kulula ukuyisebenzisa nokuluhlaza. Inayo inkunkuma yelanga yesejaji enokuthi ihlawulwe ilanga ngqo kwiiyure ezintlanu ukuya kwii-14.
Yonke imveliso inqabile ngesimo, iyigqwesileyo emgangathweni kwaye ilungile ngokuyilo. Ibonisa ukubaluleka kobugcisa bokuyila yonke indawo. Yimodeli yokudibanisa iteknoloji eluhlaza kunye nobugcisa bokuyila. Kwindawo yokukhanyisa, ukudibanisa kwe-LED ukukhanyisa kunye ne-acrylic transfixion yamkelwa, kunye nokucwangciswa ngokubanzi kwepaneli yokukhanyisa, okwenza umzekelo ube ovulekile kwaye ubuhle, kwaye uwakha indawo engummiselo wesicelo kubasebenzisi. Njengomkhiqizo wenhlalakahle kawonkewonke, i-FIZZ GLOBAL izama ukufezekisa iimfuno zokusebenza eziphambili kunye neendleko eziphantsi kakhulu kwinkqubo yophuhliso, ukwenzela ukuba loo mveliso ifikelele kubantu abafanelekileyo kwizinga elikhulu. Gcina ulwazi oluthe vetshe, vumela ukukhanya konke kukhanya ngakumbi. Ngethuba le nkqubo yokucwangcisa, i- FIZZ GLOBAL ivavanya ukuvavanya ukungafani, iphule iingcamango zendalo kunye nokuzaliswa kwemveliso emveli yemveliso.
I-LED yokufunda i-LED iLght
Ukukhanya kwelanga ukukhanya kwelanga
Ukukhanya kwelanga lokuFunda kwelanga